मलेसियामा ६ महिना जेल बसेर काठमाडौं अाईपुगेको बिल बहादुर घर जान पाएन – पुरा पढ्नुहोस्……
मलेसियामा ६ महिना जेल बसेर काठमाडौं अाईपुगेको बिल बहादुर घर जान पाएन
काठमाडौं, चैत १९– कष्टपूर्वक छ महिना मलेसियाको जेलमा बसेर काठमाडौं आइपुग्दा बिलबहादुर निक्कै खुसी थिए । यो खुसी तत्काल घर फर्किएर बुबाआमा, श्रीमती, छोराछोरी, दाजुभाउजु र आफन्तसँग साट्न चाहन्थे । तर बिलबहादुर जेल परेको खबर सुनेपछि उनकी श्रीमति लोग्नेकै पीरले थला परिसकेकी थिइन् । बिमारले थलिएर सिकिस्त भै श्रीमती सोममाया बिलबहादुरलाई वीर अस्पतालको वेडमा छट्पटाउँदै पर्खिरहेकी थिइन् ।
बिलबहादुर जेल परेपछि चिन्ताले थलिएकी सोममायाको मृगौलामा समस्या भैसकेको थियो । आँखा देख्न छाडेकी थिइन् । रामेछाप फर्किने ईच्छालाई मनमा दबाएर बिलबहादुर विरामी श्रीमतीलाई भेट्न आफन्तसँगै अस्पतालतिर लागे ।
उनलाई विमानस्थलसम्म लिन दाइ लालबहादुर र भाउजु पुगेका थिए । बिलबहादुरलाई भेटेपछि दाजु विमानस्थलमै ‘मेरो भाइ आइपुग्यो भन्दै उफ्रिए ।’ भाइलाई जेलबाट छुटाउन दौडधुप गर्दागर्दै लालबहादुरको होसहवास उडिसकेको थियो । त्यो बेला उनी सुर र बेसरका कुरा बराबर गर्ने अवस्थामा पुगेका थिए । आफू त्यसरी उफ्रिएको लालबहादुरले नै थाहा पाएनन् । मलेसियामा जेल बस्दा बिलबहादुरलाई जति पीडा भयो त्यो भन्दा बढि दाजु लालबहादुर र श्रीमती सोममायालाई थियो ।
भाइको पीरले बुहारी थला परेपछि दुई छोरा र बुहारीलाई उपचारका लागि लालबहादुरले नै काठमाडौं ल्याएका थिए । तर पैसा नहुँदा उनले अहिले पनि राम्रोसँग उपचार पाउन सकेकी छैनन् । उपचारको लागि ल्याएको पैसा दलाल जोगेन्द्र र सुनितालाई बुझाएका थिए ।
सोममायाको उपचार गर्न ऋण काडेर ल्याएको ६० हजार मध्ये बिलबहादुरलाई फर्काइदिन्छौं भनेपछि ५९ हजार रुपैयाँ बुझाउँदै गर्दा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । प्रमाणका लागि पैसा पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतमै पेश गरेकाले मुद्धाको फैसला भै नसकि लालबहादुरले त्यो रकम फिर्ता नपाउने भएका छन् ।
श्रीमती सोममायालाई अहिले अस्पतालबाट आफन्तकोमा लगिएको छ । श्रीमान फर्केपछि सोममायाको स्वास्थ्यमा केही सुधार भएको छ, तर ठीक भएको छैन् । बीर अस्पतालले औषधी खाँदै गर्नु चैत २५ गते फेरी आउनु भनेको छ । तर अव बिलबहादुरसँग पनि श्रीमतीको उपचार गराउने पैसा छैन ।
ऋण तिर्न विदेश गएका बिलबहादुर ऋणै बोकेर फर्किएका छन् । १५ वर्षको उमेरमै विवाह गरेका बिलबहादुर एक वर्षपछि बुबाआमाबाट भिन्दै बस्न थालेका थिए । छुट्टिँएर घर बनाउँदा उनलाई तीन लाख रुपैया जतिको ऋण लागेको थियो । त्यही ऋण तिर्न भनेर विदेश जाँदा फेरी १ लाख ५० हजार रुपैयाँ ऋण काढेका थिए । सन् २०११ मा ४ सय रिंगिट महिनावारी पाउने काममा मलेसिया गएका उनले पहिलाको ऋण त तिरिसके तर फेरि नयाँ ऋण लाग्यो । श्रीमती विरामी भएपछि उपचार गराउँन, आफूलाई फर्काउँछु भन्ने दलाललाई दिँदा र आफू फर्किँदा टिकटका लागि पठाएको रकम ऋण काढेर पठाइएको थियो ।
उता भाइ जेल परेदेखि नै उद्धारमा कुदेका लालबहादुरको दौडधुप पनि अझै सकिएको छैन् । पक्राउ परेका दलाल धरौटीमा छुटेपछि न्याय पाइने हो कि होइन ? भन्ने चिन्तामा छन् । भाइ फर्किएपछि मुद्दा बुझ्न प्रहरी कार्यालयमा पुगेका लालबहादुरलाई प्रहरीले मुद्दा अदालतमा पुगेकाले अव सबै कारवाही उतैबाट हुन्छ भनेर फर्काइदिए ।
दलाललाई बुझाएको रकम फिर्ता भए पनि उपचार खर्चमा सहयोग पुग्थ्यो भन्ने आश परिवारको छ । तर मुद्दाको फैसला कहिले हुने हो टुँगो छैन ।
रामेछापबाट बाबुआमाले फोन गर्छन् ‘कहिले आउँछस् छोरा घर, हामीलाई कहिले देखौं भै सक्यो ।’ बिलबहादुर जवाफ दिन्छन् ‘बुहारीको उपचार भएपछि ।’ जेलबाट छुटेर काठमाडौं फर्किएको एक साता हुँदा पनि बिलबहादुर घर पुग्न सकेका छैनन् ।
स्रोत:- उजिर कार्की/उज्यालो ।
Prevक्रिकेट मैदानका लागि धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनलाई भरतपुर महानगरपालिकाले जग्गा दिने
Nextशंकर बिसीले गरे प्रहरीमा साइबर क्राइम बिरुद्ध मुद्दा दर्ता ..
७० बर्षका बृद्धले २० बर्षीय युʼवतीलाई यो कारण गरे बिबाह, हेर्नुʼस यति राम्रा छन् २ जना छोराʼछोरी (भिडियो सहित)
“माया मारेर” गितबाट निकै चर्चामा आएकी समिक्षा अधिकारीको फेरि अ’र्को भाग २ आउदै, (भिडियो हेर्नुहोस्)
पर्वतमा चार मिटर लामो सर्पले आतङक मच्चाउँदै, गाउँले त्रासमा ।
खु’सीको खबर ! विश्बकै उत्कृष्ठ शक्तिमा पाथीभरा मन्दिर छ’नौट… सबैले दर्शन गर्दै शे’यर गरौं…